Kutora mifananidzo muWheelchair | Karman® Mawiricheya
hwiricheya Photography Starter Chirongwa
Kana iwe uchida yekunakidzwa hobby kuita izvo hazviite chaizvo mutengo zvakawanda ipapo kutora mifananidzo ndekwewe. Unogona kutora mifananidzo inoshamisa yako wega wiricheya isina kuda kuve nyanzvi. Muchokwadi, kana iwe usina mari yekutenga imwe kamera asi iwe uine smartphone saka unogona kushandisa yako smartphone. Nekuti mafoni emagetsi izvozvi ane lens yakanaka kwazvo yakavakirwa mukati uye iwe unogona zvakare kurodha maapplication kukubatsira iwe kugadzirisa kamera kune ako aunofarira. Kamera yedhijitari inokosha inogona kukumhanyisa paavhareji $ 400 brand new asi unogona zvakare kutenga imwe yakashandiswa pa craigslist. Ukasarudza kutenga yako midziyo kubva kune vashandisi pa craigslist ita shuwa kuti unozviita zvakachengeteka nekuti haugone kukanganwa kuti ivo vatorwa zvachose. Imwe nzvimbo yakanaka yekutora kamera yako kana midziyo Anwendung inonzi Offer kumusoro. Mune ino app, unosangana nevashandisi vemuno mune imwe mile mile.
Dzidza kushandisa kamera yaunotenga uye dzidza zvishoma zvekutanga zvemifananidzo kuti utore mifananidzo iri nani. pano chinongedzo kumavhidhiyo eYouTube kukubatsira iwe kuona zvimwe zvidzidzo. Tsvaga vhidhiyo inosanganisira iyo kamera yauinayo uye uione kakawanda o haungakanganwe nekuti inogona kunge iri ruzivo rwakawanda kutora mukati. Rimwe zano rakakura ringave rekutora kosi maererano nezvakakosha zvacho nekuti icha kukubatsira iwe zvakanakisisa uye kukugadzirira iwe yako itsva chitandadzo.
Mushure mekutenga yako itsva kamera kana iwe uri kungoenda neako smartphone saka unofanirwa kutanga kuronga kana uchizoenda kunze wotanga kupfura. Enda kuguta rako repedyo uko vane zvinoshamisa vies uye zvivakwa zvekuvaka uye vanazvo pazviri. Usati waenda kunze kwekuronga kuti chaiko kwauri kuenda kana kana iwe uri mushingi enda chete kwese kwese! Kuchengeta zvirongwa muplanner kunogona kuratidzwa kunobatsira nekuti hauzokanganwa kwaunoda kuenda.
Iwe wasvika pano uye ikozvino wave kunze mumunda uye wagadzirira kutanga kutora mifananidzo. Ita kuti iyo kamera inobhadhariswa uye ngowani bi-pod yakagadzirira uye kutora mifananidzo manheru kunenge kuchinakidza nekuti zuva rinotanga kunyura uye iwe unozowana iwo mafoto aunopedzisira waita ekuumbiridza. Sezvo iri nguva yako yekutanga saka tora mifananidzo yakawanda kuti usazosiya imwe pfuti yauri kutsvaga kutora. Usakanganwa iwo matipi awakadzidza kubva kuYouTube mavhidhiyo uye uashandise iwo mukana wako.
Paunenge wave kumba uye uine ndangariro yako izere nemifananidzo yese gadzirira kutanga kugadzirisa imwe yemifananidzo iyo. Bvisa iwo ausingade kana asina kubuda zvakanaka sevamwe. Kune mawebhusaiti ekugadzirisa uye software aunogona kushandisa senge Adobe Lightroom. Unogona zvakare kushandisa Adobe Photoshop asi zvigadzirwa izvi mari mari uye ndiwo maindasitiri zvigadzirwa zvakanakisa zvekushandisa.
Kufamba uri pawiricheya